Xisbiga ay hogaamiso Aung San Suu Kyi oo ku guuleystay doorashadii ka dhacday Myanmar | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Xisbiga ay hogaamiso Aung San Suu Kyi oo ku guuleystay doorashadii ka...
Xisbiga ay hogaamiso Aung San Suu Kyi oo ku guuleystay doorashadii ka dhacday Myanmar
Waxaa maanta lagu dhawaaqay doorashada madaxtinimo ee Myanmar cidda ku guuleystay.
Xisbiga ay hoggaamineyso haweenayda Aung San Suu Kyi ayaa mar kale ku guuleystay doorashada sanadkaan ka dhacday Myanmar.
Xisbigan oo NLD la yidhaahdo ayaa waxa uu aqalka hoose oo ka kooban 440 xubnood ka helay 249 cod, halka aqalka sare oo iska ka kooban 224 xubnood uu ka helay 135 cod, taas oo ah codadkii ugu badnaa marka loo eego cododkii ay heleyn xisbiyadii kale.
Xisbiga Aung San Suu Kyi ayaa hadda waxa uu awood buuxda u yeelanayaa in uu soo dhiso Xukuumad awood u leh in ay hoggaamiso guud ahaanba dalka.
Haweenaydan ayaa waxaa lagu eedeeyaa gabood fallo ay u gaysato Muslimiinta Myamar gaar ahaan qoomiyada Rohinga, iyo sidoo kale falal ka dhan ah Xuquuqul Aadanaha oo ay dalkaasi ka gaysatay mudadii ay maamulaysay.
Xisbiga ayaa horay u qabay kalsooni ah inuu guuleysan doono, ugu dambeynna waa uu guuleystay, waxaana durbaba bilaaay siyaasiyiin iyo dawladaha jaarka la ah madaxdooda in ay u hambalyeeyaan guusha uu gaadhay haweenaydan Xisbigeeda.